အံ့ဩစရာတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုနည်း - Myanmar Network
အံ့ဩစရာတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုနည်း
Posted by Language Republic on March 14, 2016 at 12:06 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အံ့ဩစရာတွေဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောရမလဲဆိုတာ အပိုင်းလိုက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ အပိုင်း (၁) ကို ဒီအပါတ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
bolt from the blue - အားလုံးအံ့အားသင့်လောက်သည့် လုံးဝမမျှော်လင့်သည့်ကိတ်စတစ်ခုခု ဖြစ်သွားပါက ၎င်းကိတ်စကို bolt from the blue ဟူ၍သုံးနိုင်သည်။
The news that they had got married wasabolt from the blue. (သူတို့လက်ထပ်သွားတဲ့သတင်းက လုံးဝအံ့အားသင့်စရာပါ)
He seemed to be very happy in his job, so his resignation came asabolt out of the blue. (သူအလုပ်ထဲမှာအလွန်ပျော်နေပုံပေါက်တော့ အလုပ်ထွက်လိုက်တာက မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အံ့ဩစရာပါပဲ)
The announcement about redundancies wasabolt from the blue for the workers in the office. (လူတွေလျှော့မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကြောင့် ရုံးအလုပ်သမားအားလုံး မှင်တက်အံ့ဩကုန်ကြတယ်)
out of the blue - အပေါ်မှာရှင်းပြထားသည့် bolt from the blue နှင့်အနည်းငယ်ဆင်တူပါသည်။
Out of the blue, they got married last week. (အရင်အပါတ်က သူတို့ရုတ်တရက်လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်)
Out of the blue, my parents decided to buy meabrand new car for my birthday. I’m so happy. (မိဘတွေက မွေးနေ့အတွက် ကားအသစ်တစ်စီးဝယ်ပေးမယ်လို့ မထင်မှတ်ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းပျော်တယ်)
I hate it when out of the blue, things start going wrong. (ရုတ်တရက်ချက်ချင်းအမှားအယွင်းတွေဖြစ်တာကို ကျွန်တော်မုန်းတယ်ဗျာ)
caught unawares - မမျှော်လင့်ပဲအငိုက်မိသွားခြင်း၊ သတိမထားမိပဲဖြစ်သွားခြင်းတို့ကို ဖော်ပြလိုသောအခါ caught unawares ဟုသုံးနိုင်သည်။
The question caught me completely unawares. (မေးခွန်းကြောင့် အငိုက်မိသွားခဲ့သည်)
The security guard moved so silently that the thief was caught unawares. (လုံခြုံရေးအစောင့်သည် အလွန်တိတ်ဆိတ်စွာလှုပ်ရှားခဲ့သောကြောင့် သူခိုးမှာအငိုက်ဖမ်းခံလိုက်ရပြီ။
credibility gap - သင်ယုံကြည်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာ နှင့် သင့်အား (တစ်စုံတစ်ဦးမှ) ယုံကြည်ခိုင်းသည့်အတိုင်းအတာ၏ခြားနားချက် ကိုပြောဆိုရေးသားရာတွင် သုံးနိုင်သည်။ သတင်းစာဆရာများမှ နိုင်ငံရေးသမားများမှပြောသော မုသားအလိမ်အညာများအား သွယ်ဝိုက်ဖော်ပြရာတွင် သုံးနှုံးရင်းလူသုံးများလာသည့် အသုံးဖြစ်သည်။
There isacredibility gap between what the mayor says and what the people see happening in the city. (မြို့တော်ဝန်ပြောနေတာနဲ့ လူတွေမြင်နေတဲ့မြို့ထဲက အဖြစ်အပျက်တွေက တခြားစီပါပဲ)
President Obama is suffering fromagrowing credibility gap. (သမ္မတအိုဘားမားသည် ကြီးထွားလာသည့် ယုံကြည်မှုကျဆင်းခြင်းဒါဏ်ကို ခံစားနေရသည်)
doadouble take - မြင်ရသည်ကို မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားသဖြင့် နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်သည်
He didadouble take when he saw his wife inarestaurant with another man. (သူ့မိန်းမအားအခြားလူတစ်ဦးဖြင့် စားသောက်ဆိုင်တွင် အတူတွေ့လိုက်သောအခါ (မယုံနိုင်ဖြစ်သွားပြီး) သေချာစေရန်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်)
He walked past her and she didadouble take. Without his beard he was quite transformed. (သူမနားမှ သူဖြတ်လျှောက်သွားသောအခါ သူမနောက်တစ်ကြိမ်သူ့အား ပြန်ကြည့်မိလိုက်သည်။ မုတ်ဆိတ်များမရှိတော့သောကြောင့် သူ့ရုပ်မှာသိသာစွာ ပြောင်းလဲသွားချေပြီ။)
dropabombshell - မမျှော်လင့်ထားတဲ့၊ အခြေအနေတွေကိုပြောင်းသွားစေတဲ့ ကြေငြာချက်၊ ပြောဆိုမှု တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တာကို "ဗုံးချလိုက်သလိုပဲ" လို့တင်စားထားတဲ့ အီဒီယမ်ပါ။
The chairman droppedabombshell when he announced the merger with the company's biggest rival. ( ဥက္ကဋ္ဌကြီးက ကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးဆုံးပြိုင်ဖက်နဲ့ ပူးပေါင်းတော့မယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ အားလုံးအကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရတယ်)
eyes on stalks - စိတ်ဝင်စား၊ အံ့ဩလွန်းလို့ တစ်ခုခုမျက်လုံးတွေပြူးပြီးကြည့်တာကို ပြောတာပါ။
The child's eyes were on stalks as he watched the magician's performance. (မျက်လှည့်ဆရာ၏ ပြကွက်များအား ကလေးများမင်တက်အံ့ဩစွာ ကြည့်ကြသည်)
jaw drops - ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်အောင် အံ့အားသင့်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
When the prize was announced, the winner's jaw dropped. (ဆုရသူကိုလဲ ကြေညာလိုက်ရော၊ နိုင်သွားတဲ့သူလဲ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပါလေရော)
jump out of one's skin - အရမ်းလန့်သွားတာ၊ အလွန်တုန်လှုပ်သွားတာကို သုံးတဲ့အသုံးပါ။
Jane nearly jumped out of her skin when the horse put its head through the kitchen window! (မြင်းကြီးက သူ့ရဲ့ ခေါင်းကို အိမ်နောက်ဖေးခန်းပြူတင်းထဲကို ထည့်လိုက်တဲ့အခါ Jane အရမ်းလန့်သွားပါတယ်) (ရုတ်တရက် သူရှိနေတဲ့ အခန်းထဲကို မြင်းရဲ့ ခေါင်းကြီးဝင်လာတော့ လန့်သွားတာပေါ့!)
knock your socks off - အံ့ဩမှင်တက်သွားစေတာ၊ အရမ်း impress ဖြစ်သွားစေတာ ကိုပြောတာပါပဲ။
The magnitude of the project will knock the socks off everyone in the office. (စီမံကိန်းရဲ့ ကြီးမားမှုက ရုံးကလူအားလုံးကို အလွန်အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့တယ်)
အံ့ဩစရာတှဖွေဈတဲ့အခါ ဘယျလိုအင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ပွောရမလဲဆိုတာ အပိုငျးလိုကျဖျောပွပေးသှားပါမယျ။ အပိုငျး (၁) ကို ဒီအပါတျ တငျပေးလိုကျပါတယျ။
bolt from the blue - အားလုံးအံ့အားသငျ့လောကျသညျ့ လုံးဝမမြှျောလငျ့သညျ့ကိတျစတဈခုခု ဖွဈသှားပါက ၎င်းငျးကိတျစကို bolt from the blue ဟူ၍သုံးနိုငျသညျ။
The news that they had got married wasabolt from the blue. (သူတို့လကျထပျသှားတဲ့သတငျးက လုံးဝအံ့အားသငျ့စရာပါ)
He seemed to be very happy in his job, so his resignation came asabolt out of the blue. (သူအလုပျထဲမှာအလှနျပြျောနပေုံပေါကျတော့ အလုပျထှကျလိုကျတာက မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ အံ့ဩစရာပါပဲ)
The announcement about redundancies wasabolt from the blue for the workers in the office. (လူတှလြှေော့မယျဆိုတဲ့ကွညောခကျြကွောငျ့ ရုံးအလုပျသမားအားလုံး မှငျတကျအံ့ဩကုနျကွတယျ)
out of the blue - အပျေါမှာရှငျးပွထားသညျ့ bolt from the blue နှငျ့အနညျးငယျဆငျတူပါသညျ။
Out of the blue, they got married last week. (အရငျအပါတျက သူတို့ရုတျတရကျလကျထပျလိုကျကွတယျ)
Out of the blue, my parents decided to buy meabrand new car for my birthday. I’m so happy. (မိဘတှကေ မှေးနအေ့တှကျ ကားအသဈတဈစီးဝယျပေးမယျလို့ မထငျမှတျပဲ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။ ကြှနျတျောအရမျးပြျောတယျ)
I hate it when out of the blue, things start going wrong. (ရုတျတရကျခကျြခငျြးအမှားအယှငျးတှဖွေဈတာကို ကြှနျတျောမုနျးတယျဗြာ)
caught unawares - မမြှျောလငျ့ပဲအငိုကျမိသှားခွငျး၊ သတိမထားမိပဲဖွဈသှားခွငျးတို့ကို ဖျောပွလိုသောအခါ caught unawares ဟုသုံးနိုငျသညျ။
The question caught me completely unawares. (မေးခှနျးကွောငျ့ အငိုကျမိသှားခဲ့သညျ)
The security guard moved so silently that the thief was caught unawares. (လုံခွုံရေးအစောငျ့သညျ အလှနျတိတျဆိတျစှာလှုပျရှားခဲ့သောကွောငျ့ သူခိုးမှာအငိုကျဖမျးခံလိုကျရပွီ။
credibility gap - သငျယုံကွညျနိုငျသညျ့အတိုငျးအတာ နှငျ့ သငျ့အား (တဈစုံတဈဦးမှ) ယုံကွညျခိုငျးသညျ့အတိုငျးအတာ၏ခွားနားခကျြ ကိုပွောဆိုရေးသားရာတှငျ သုံးနိုငျသညျ။ သတငျးစာဆရာမြားမှ နိုငျငံရေးသမားမြားမှပွောသော မုသားအလိမျအညာမြားအား သှယျဝိုကျဖျောပွရာတှငျ သုံးနှုံးရငျးလူသုံးမြားလာသညျ့ အသုံးဖွဈသညျ။
There isacredibility gap between what the mayor says and what the people see happening in the city. (မွို့တျောဝနျပွောနတောနဲ့ လူတှမွေငျနတေဲ့မွို့ထဲက အဖွဈအပကျြတှကေ တခွားစီပါပဲ)
President Obama is suffering fromagrowing credibility gap. (သမ်မတအိုဘားမားသညျ ကွီးထှားလာသညျ့ ယုံကွညျမှုကဆြငျးခွငျးဒါဏျကို ခံစားနရေသညျ)
doadouble take - မွငျရသညျကို မယုံနိုငျလောကျအောငျဖွဈသှားသဖွငျ့ နောကျတဈခါပွနျကွညျ့သညျ
He didadouble take when he saw his wife inarestaurant with another man. (သူ့မိနျးမအားအခွားလူတဈဦးဖွငျ့ စားသောကျဆိုငျတှငျ အတူတှလေို့ကျသောအခါ (မယုံနိုငျဖွဈသှားပွီး) သခြောစရေနျနောကျတဈကွိမျပွနျကွညျ့လိုကျသညျ)
He walked past her and she didadouble take. Without his beard he was quite transformed. (သူမနားမှ သူဖွတျလြှောကျသှားသောအခါ သူမနောကျတဈကွိမျသူ့အား ပွနျကွညျ့မိလိုကျသညျ။ မုတျဆိတျမြားမရှိတော့သောကွောငျ့ သူ့ရုပျမှာသိသာစှာ ပွောငျးလဲသှားခပြွေီ။)
dropabombshell - မမြှျောလငျ့ထားတဲ့၊ အခွအေနတှေကေိုပွောငျးသှားစတေဲ့ ကွငွောခကျြ၊ ပွောဆိုမှု တဈခုခုလုပျလိုကျတာကို "ဗုံးခလြိုကျသလိုပဲ" လို့တငျစားထားတဲ့ အီဒီယမျပါ။
The chairman droppedabombshell when he announced the merger with the company's biggest rival. ( ဥက်ကဋ်ဌကွီးက ကုမ်ပဏီရဲ့အကွီးဆုံးပွိုငျဖကျနဲ့ ပူးပေါငျးတော့မယျလို့ ပွောလိုကျတဲ့အခါ အားလုံးအကွီးအကယျြ အံ့အားသငျ့သှားခဲ့ရတယျ)
eyes on stalks - စိတျဝငျစား၊ အံ့ဩလှနျးလို့ တဈခုခုမကျြလုံးတှပွေူးပွီးကွညျ့တာကို ပွောတာပါ။
The child's eyes were on stalks as he watched the magician's performance. (မကျြလှညျ့ဆရာ၏ ပွကှကျမြားအား ကလေးမြားမငျတကျအံ့ဩစှာ ကွညျ့ကွသညျ)
jaw drops - ဒါကတော့ရှငျးပါတယျ။ ပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈအောငျ အံ့အားသငျ့တယျလို့ ဆိုလိုတာပါ။
When the prize was announced, the winner's jaw dropped. (ဆုရသူကိုလဲ ကွညောလိုကျရော၊ နိုငျသှားတဲ့သူလဲ ပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈသှားပါလရေော)
jump out of one's skin - အရမျးလနျ့သှားတာ၊ အလှနျတုနျလှုပျသှားတာကို သုံးတဲ့အသုံးပါ။
Jane nearly jumped out of her skin when the horse put its head through the kitchen window! (မွငျးကွီးက သူ့ရဲ့ ခေါငျးကို အိမျနောကျဖေးခနျးပွူတငျးထဲကို ထညျ့လိုကျတဲ့အခါ Jane အရမျးလနျ့သှားပါတယျ) (ရုတျတရကျ သူရှိနတေဲ့ အခနျးထဲကို မွငျးရဲ့ ခေါငျးကွီးဝငျလာတော့ လနျ့သှားတာပေါ့!)
knock your socks off - အံ့ဩမှငျတကျသှားစတော၊ အရမျး impress ဖွဈသှားစတော ကိုပွောတာပါပဲ။
The magnitude of the project will knock the socks off everyone in the office. (စီမံကိနျးရဲ့ ကွီးမားမှုက ရုံးကလူအားလုံးကို အလှနျအံ့အားသငျ့သှားစခေဲ့တယျ)
Permalink Reply by Khinthida Aung on March 25, 2016 at 0:37